मेडिकल कलेज Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - जीवन मरणको दोसाधमा डा.केसी, सरकार वार्ताबाटै पन्छियो !
काठमाडौं, २ साउन । जुम्लामा १९ दिनदेखि अनसनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल बनेको छ । डा.केसी पटक पटक अचेत भइरहेपनि सरकारले वार्तालाई नै रोकिदिएको छ । सरकारले डा.केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने अडान राख्दा केसी पक्षले भने पहिला चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । डा.केसी स्वयंमले आफु जतिसुकै अप्mठ्यारोमा परेपनि माग सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौँ नआउने बताएपछि समस्या थप जटिल बनेको छ । सोमबार गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीले सोमबार साँझ र मंगलबार वार्ता गरेपनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, ३२ असार । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने जिम्मा सरकारले शिक्षासचिव खगराज बराललाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । यसअघि पनि शिक्षासचिवकै नेतृत्वमा वार्ता समिती गठन गरिएको थियो । तर यसपटक शिक्षासचिवको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई पनि समेटिएको छ । अर्का सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रहने भनिएपनि नाम खुलाइएको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
जुम्ला, १९असार- विभिन्न मागहरु राखेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरुले कर्णाली प्रदेशका अस्पताल बन्द गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा। केसीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी उपचार गर्न सरकारलाई चौबिस घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै डा। केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अकस्मिक बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु ठप्प पारेर चिकित्सकहरु सडकमा उत्रिएका छन् । गत शनिबारदेखि अनशनमा रहेका डा ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं, ४ असार । पित्तथैलीको क्यान्सरले ग्रस्त वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ । झण्डै दुई महिनासम्म क्यान्सरको अन्तिम अवस्थामा मात्रै रोगको पहिचान पाएर मृत्यु कुरिरहेका देवकोटाको सोमबार साँझ निधन भएको हो । उनी आफैले स्थापना गरेको बाँसबारीको नेसनल इन्ष्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल तथा एलाइड साइन्स न्युरो अस्पतालले सोमबार साँझ ५ बजेर ३५ मिनेटमा देवकोटाको निधन भएको घोषणा गरेको हो । उनको निधनमा सामाजिक सञ्जाल श्रद्धाञ्जलीले भरिएको छ । यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था र व्यक्तिहरुले उनको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छ्न ।	थप पढ्नुहोस्
भक्तपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं ३ का प्रदेश सदस्य हरिशरण लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।मस्तिष्कघात भएपछि आइतबार दिउँसोदेखि काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगलमा उपचार गराइरहेका लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकहरुसँग समेत उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेका परिवारसँग समेत भेटेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एमडी तहको कलेजको भर्नामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी कलेजहरुले मनोमानी गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको भैरहवा मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान ‌आइओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेको त्यहा भर्ना गर्न पुगेका विद्यार्थीहरुले बताएका छन्। एमडी तहको भर्ना शुल्क आइओएमले २२ लाख तोकेको छ। सुरुमा ११ लाख र बाँकी किस्तामा शुल्क बुझाउने आइओएमले काउन्सिलिङ गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्